Ukubuyekezwa komlando weMpi yaseSandlwana – Ubukhosi
Home/ Umlando Wethu/Ukubuyekezwa komlando weMpi yaseSandlwana
nguDKT uVUSI SHONGWE
0 4,143 3 minutes read
Kunesisho esithi: “kungabi amabhubesi abhala owawo umlando, izindaba ezixoxwayo ngokuzingela ziyolokhu zatusa noma zancoma umzingeli.” Kanjalo uma noZulu engakawubhali yena ngokwakhe umlando wakhe, okuxoxwayo ngezimpi zomzabalazo wokulwela izwe kuyolokhu kwanconywa abacindezeli nabaqoli be-Afrika
AKUNGABAZEKI ukuthi uma kukhona umuntu owakwazi ukuveza nokubeka isithombe esifanele ngokuhlabana kukaZulu empini yaseSandlwana, lowo nguBenjamin Disraeli owayenguNdunankulu waseBhrithani ngesikhathi sempi yaseSandlwana. Uphawula ngokunengeka ethi, “The remarkable Zulus. They defeat our generals. They convert our bishops. They settled the fate of one of Europe’s dynasty.” Esingakuhumusha ngokuthi: “AmaZulu uqobo. Ehlula abakhuzi bempi yethu. Aphendula abaBhishobhi okholweni lwabo. Aqede obunye bolibobukhosi baseYurophu.”UPrince u-Imperial waseFrance owayelindeleke ukuba abe iNkosi yaseFrance wafa empini yaseSandlwana emva kokuba wayecele iNdlovukazi uVictoria ukuba alwe naye ngasohlangothini lwamaNgisi. Wasala enkundleni lapho uZulu wayebambene khona namaNgisi. Akuwona kuphela amaNgisi agqenywa engeqiwa ntwala; namaFulentshi imbala. Ukungabi khona kobukhosi eFrance kungenxa yokusala enkundleni kwalowo owayebhekwe njengozoba iNkosi yamaFulentshi, uPrince u-Imperial.
Ukufika kombiko wokwehlulwa kwamaNgisi akugcinanga ngokucasula iNdlovukazi uVictoria kodwa kwaphinde kwaba yinkanankana eyaba yinselelo enkolweni-ze eyayigxisheke ezingqondweni eyayithi amaNgisi ayiziqhwaga ngokwemvelo yobuhlanga bawo ezintweni zobunyoninco nasekwakheni okusebenza ngobuchule noma ngobuchwepheshe.
Nanamhlanje ukwehlulwa kwamaNgisi uZulu kuwuzozo obhibhayo ongasoze wasuleka emlandweni wezempi zamaNgisi, kungacishe kufaniswe nephupho elibi abangafisi ukuthi bangaphinde baliphuphe. Ayengakaze amaNgisi acabange futhi aphuphe ukuthi ngelinye ilanga isithunzi sobukhulu bawo singadicilileka phansi.
Kubalulekile ukuveza ukuthi ukuhlabana kukaZulu eSandlwana namhlanje kuthathwa hhayi ngokuhlabana kukaZulu kuphela, kodwa ukuhlabana kwawo wonke umuntu wezwekazi lase-Afrika kanye nabo bonke abantu okunkaba yabo ise-Afrika. Ukuhlonishwa nokubungazwa kokuhlabana kukaZulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi ezwenikazi lase-Afrika, kungesinye sezizathu zokuthi iNgonyama yamaZulu ithathe isinqumo sokuthi intaba yaseSandlwana yaziwe njengentaba engcwele. Kungumqondo ophusile ukuthi intaba yaseSandlwana kufanele ibe yindawo ehloniphekile kubantu base-Afrika. Ifanele ukuba yindawo lapho bonke abantu, hhayi uZulu kuphela, uma befuna ukukhuthazeka kulokho abafuna kwenzeke empilweni yabo kuphumelele, kofanele beze kule ntaba ukuzokhuleka bathole ugqozi kanye nentshisekelo yokuphumelela eyakhonjiswa uZulu ngesikhathi ecoboshisa amaNgisi.
Lokhu kusikhumbuza isisishoshovu somzabalazo wabantu abamnyama eMelika, uKwame Ture, owathi: “uma ungazazi ukuthi ungubani, ngeke wazi ukuthi uthandani.” Indaba isekutheni abantu abangaqondi lutho ngomlando bathuntubezekile ekwakheni umbono wekusasa labo ngoba izolo labo liluvindi futhi libhashiswe ngandlela thize. Abantu abangenawo umqondo walokho abakwenzayo baba nobunzima obukhulu ukuba babenofuqufuqu lokuthi into ethile bangayenza. Ngakho-ke impi yaseSandlwana ingumsuka wogqozi olukhulu kithi. Makhulu amazwi kaMarcus Garvey owathi: “abantu abangenalo ulwazi lomlando wabo, abangazazi izingxabo zabo, namasiko abo, bafana nesihlahla esingenazo izingxabo.” Ngamafuphi impi yaseSandlwana yenza uZulu kanye nawo wonke umAfrika ahambele phezulu. Ukuhlabana kukaZulu empini yaseSandlwana kukhombisa ukuthi uyakwazi ukunqoba. Engani yikho lokho-ke okuyinkomba yokuthi uZulu ngeke kube nzima kuye ukuphumelela ekuhlangabezaneni nezinselelo ezibhekene nesizwe. Kukhombisa ukuthi uma wonke umuntu engangenwa ugqozi uyosuka amagqoza azinikele, ahlabane njengoba kwahlabana amabutho eSILO eSandlwana. UZulu wakhombisa intshisekelo yokuphumelela ebunzimeni, masikucacise lokhu ukuthi uZulu wayengasabhekene nabelungu nazibhamu kuphela, kodwa kwasekhukhona namambuka. Pho-ke uZulu uma esezimisele ukungadikibali, akadikibali.
Ziningi izifundo umuntu angazifunda ngokuvelela nokuhlabana kukaZulu empini yaseSandlwana. Uma sonke singangenwa yilolu gqozi, nalolu fuqufuqu kanye netshisekelo yokuphumelela eyayingenwe uZulu ngesikhathi elwa namaNgisi, anginakho ukungabaza ukuthi isifo sengculazi kanye nezinye izifo zingancipha.
Ucwaningo lwakamuva lukhomba ukuthi unya olwatshengiswa amaNgisi eqedela ngokubulala uZulu owawulimele luphoqa osomlando ukuthi basho ngokungangabazi ukuthi ukuziphindisela kwamaNgisi kuZulu kwakufana nse nalokhu okuthiwa imbubhisaluntu (genocide). Miningi imiphefumulo kaZulu eyaphangalala kungafanele iphangalele kwazise iningi labo lalingalapheka ekudutshulweni ayekutholile kodwa amaNgisi ancoma ukubaqedela. Ngakho-ke iyadinga ukukhulekelwa ukuba ilale ngokuthula leyo miphefumulo eyaphuma ikhononda.
Ama-Ayirishi akhumbula umlando ngokwedlulele, amaNgisi awukhohlwa kakhulu umlando
Kuhlala kuyisilonda ukuthi yini eyangena ezingqondweni zabantu baKwaZulu. Okubuhlungu ukuthi nabo lobo bukhulu nobuzemazema bukaZulu obabonwa uNdunankulu uDisraeli abubonwa noma abukho lapho impi eyabambana khona. Impela uma amabutho kaZulu angavuka ekufeni namhlanje angikholwa ukuthi angaduka uma eza lapha eSandlwana kwazise kuncane okuguqukile kulokho okwakukhona ngowe-1879. Yizindlu ezinogesi kanye namanzi ezisondelene nentaba iSandlwana okungacishe kuphawulwe ngamabutho. Ngaphandle kwalokho intaba yaseSandlwana isenjalo njengoba yayinjalo ngesikhathi uZulu ebambene namaNgisi. Ukungabi khona kwesakhiwo esibukekayo sokubungaza kanye nokukhumbula uZulu owanikela ngempilo yakhe ukuvikela ubukhosi babo kungenze ngakhumbula umbhalo ka-Oscar Wilde lapho ethi, “Ama-Ayirishi akhumbula umlando ngokwedlulele, amaNgisi awukhohlwa kakhulu umlando.”
Umehluko phakathi kwethu namaNgisi kanye nama-Ayirishi ukuthi thina kasinandaba nomlando wethu. Kungathi imiqondo yethu ingenwe yilokhu izifundiswa ezikubiza ngokuthi: ‘Ukukhumbula ukukhohlwa noma ukukhohlwa ukukhumbula.’
Kushayisa amahloni ukubona isakhiwo eBelgium esigcine umlando wempi yaseWaterloo. Lesi sakhiwo esiyisigcinimafa womlando wempi yaseWaterloo siyisikhumbuzo sokuthi izwekazi lase-Europe lisukaphi ngokomlando. Leyo mpi yashayela isipikili sokugcina ekwehlulweni kwamaFulentshi ayeholwa nguBonaparte owayesenqobe ingxenye enkulu yezwekazi i-Europe ekuqaleni kwekhulunyaka le-19.
Kuyajabulisa ukuthola ukuthi inhlangano ezimele iKwaCulture eholwa nguGugu Ngcobo igidlabezwe ngemali inhlangano yeLotto ukuba kwakhiwe isigcinamafa lapha eSandlwana esizogcina konke ngempi yaseSandlwana kanye nakho konke okungamagugu aphathelene noZulu. Ezinyangeni ezingengaki ezedlule iNgonyama ibihlaba eliqondene nohlelo oluzoqala maduze lokwakhiwa kwesakhiwo esizogcina amafa namagugu empi yaseSandlwana.
Impi yaseSandlwana yasishiya nezifundo eziyifa negugu elikhulu. Leli lifa esalishiyelwa yile mpi lisifundisa ukungabi amagwala, kodwa sibe nogqozi lokuzidela, futhi kuqunga isizwe isibindi, kusiqondise ekulweni nezimpi esisazobhekana nazo njengesizwe. Kubalulekile ukusho ukuthi ukubuyiswa nokuvuselwa kwamagugu esizwe kungebe umsebenzi ongabhekana noHulumeni kuphela. Lona ngumsebenzi obhekene nongenziwa yibo bonke abantu. Lokhu kufakazelwa isaga esidala esidumile sase-Afrika esithi, ‘isandla esisodwa singeze samboza isibhakabhaka, kungaba izandla eziningi ezingakwazi ukwenza lowo msebenzi’.
UMengameli waseBotswana uSir uSeretse Khama ethula inkulumo yakhe emcimbini wokuthweswa kweziqu eNyuvesi yaseBotswana, eLesotho kanye neSwaziland, wagcizelela ukuthi aboHlanga bangazibukeli phansi. Nanso-ke inselelo esizukulwaneni samanje ukuba sibhale siqondise kahle umlando wethu.